Banyere Anyị - Zuru okè Ngosi Technology Co., Ltd.
Zuru okè ngosi Technology CO., LTD
Zuru oke Ngosipụta Teknụzụ Co., Ltd. hiwere na 2006 ma kemgbe ahụ anyị mepụtara ka ọ bụrụ ndị na-eduga LCD na ngwaahịa ngosi ọkụ, gụnyere ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu, ndị nyocha CCTV, ndị na-elele ọha na eze, PC niile-In-One, Digital Signage na Whiteboards mmekọrịta. Na ulo oru 15,000 m2, 2 akpaka na 1 usoro ntinye anyi nwere ikike imeputa otu nde nkeji kwa afo. N'ihi mgbasa na-aga n'ihu n'oge na-adịghị anya, anyị ga-aga ụlọ ọrụ ọhụrụ, nke buru ibu karị, na-abawanye ikike anyị karịa nkeji abụọ kwa afọ
Anyị na-etinye nnukwu ego nke ego anyị na Research and Development na anyị nwere obi ike na anyị na-enye ụfọdụ ndị nlezianya kachasị mma na ngwaahịa ngosi dị na ụwa. Anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mepụta ngwaahịa anyị ma nụchaa ngwaahịa anyị, na-enye anyị ngwaahịa ọhụụ. Anyị ahụmahụ R & D ọkachamara na-mgbe niile na-arụ ọrụ na-emebe ngwaahịa na ị na ndị ahịa mkpa na chọrọ. Anyị na-enyekwa ọrụ OEM na ODM zuru oke, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ otu ngwaahịa anyị nwere obi ike na anyị nwere ike ịmepụta ma rụpụta ya maka gị.
Anyị na-anya isi na anyị abụghị ndị dị ọnụ ala karịa na ahịa dị ka anyị kwenyere na anyị kwesịrị iwulite ma ọ bụ ngwaahịa ruo ogo, ọ bụghị rue ọnụahịa! N'iburu nke ahụ n'uche, anyị na-eji ngwa ọrụ kachasị mma, site na ogwe aka ruo na ndị na-eguzogide.
Companylọ ọrụ anyị enwetawo ụkpụrụ ISO kachasị ọhụrụ, gụnyere ISO9001: 2015 na ISO14001: 2015, yabụ ị nwere ike iji obi ike soro anyị rụọ ọrụ. Ọzọkwa, ngwaahịa anyị niile nwere CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, asambodo WEEE na Energy Star, yana asambodo UL dị maka ego.
Ihe omuma ihe omuma anyi gbadoro ukwu 4 - iguzosi ike n’ezi ihe, ihe ohuru, oru na oru
Ọ bụ ebumnuche anyị ịghọ onye nrụpụta ihe eji emepụta ngwaahịa na ụwa, ma anyị kwenyere na anyị nọ n'ụzọ iji nweta ebumnuche a.